प्रकाश दाहालको मृत्युको समाचार ‘ब्रेक’ गर्दा झेल्नु परेको दुई घन्टाको अनुभूति - Medianp
काठमाडौं, ४ मंसिर । सदाझैँ आइतबार पनि म बिहान ६ बजे नै अफिस आइपुगें । अफिस आएसँगै नियमित सेड्युलअनुसार बिहानको समाचार अपडेट गर्न लागें । दुईवटा न्युज अपडेट गरेलगत्तै ६ः३० बजे मेरो मोबाइलमा घन्टी बज्यो । फोन उठाएँ । उताबाट आएको खबरले म एकाएक स्तब्ध भएँ ।
आफूलाई सम्हालेर सबै सूचना सुनें । खबर थियो, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका छोरा प्रकाश दाहालको निधनबारे । पत्याउन निकै गाह्रो भयो । हामी पत्रकारलाई सधैं न्युज र तस्बिर दिएर ‘समाचार ब्रेक’ गर्ने प्रकाशको अल्पायुमै निधनको खबर ‘ब्रेक’ गर्नुपर्ने अवस्था थियो । तर, विश्वास लागेन ।
स्रोतलाई फेरि सोधें, साँच्चै हो र ? उताबाट जवाफ आयो, सत्य हो नर्भिक अस्पतालमा राखेको छ ।
त्यो खबरसँगै मेरो शरीरमा ४४० भोल्टको करेन्ट दौडिए जस्तै भयो । अनि लागें, आफ्नो स्रोतबाट खबर भेरिफाई गर्न । तीन चार ठाउँमा फोन गरें । सबैतिरबाट एउटै प्रकारको जवाफ आयो । अस्पताल आउनुअघि नै मृत्यु भइसकेको चिकित्सकहरूको भनाइ आयो । प्रचण्ड झापामा रहेकाले ८ बजे आइपुग्ने र मृत्युको औपचारिक जानकारी दिने अस्पताल स्रोतले जानकारी दिएपछि मात्र प्रकाशको मृत्यु भइसकेको रहेछ भन्नेमा म विश्वस्त भएँ ।
त्यसपछि समाचारको शीर्षक राखें, ‘रहेनन् प्रचण्ड पुत्र प्रकाश दाहाल’ । समाचार तयार गर्दासम्म ६ः४५ भइसकेको थियो ।समाचार पोस्ट गर्नुअघि फेरि स्रोतसँग एकपटक कुरा गरें र भनें, ‘चुनाव मुखमा छ । यस्तो समाचार राख्दा अफवाह हुन सक्छ, अप्ठेरो पर्न सक्छ ।’ तर उनले फेरि पनि खबर सत्य हो भनेपछि अनि मात्र ७:२८ बजे समाचार पोस्ट गरें र सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरें ।
सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेको २–३ मिनेट बित्न नपाउँदै मेरो मोबाइल र अफिसको फोनमा तारान्तार घन्टी बज्न थाल्यो । आफ्नै सहकर्मीको पनि फोन आउन थाल्यो ।
अफिसको फोनमा समाचारको सत्यता के हो भनेर सोध्ने र बुझ्ने भन्दा पनि अत्यन्तै तल्लो स्तरको गालीगलौज गरियो । ‘सद्दे मानिसलाई मर्‍यो भनेर लेखछस् ? तेरो अफिसमा आएर उडाइदिन्छु,’ ‘अफिसमै तलाई पनि आगो लगाइदिन्छु’ जस्ता धम्की र अश्लील गालीगलौज सुन्नु पर्‍यो ।
कोही भने किन कसरी निधन भन्यो ? भन्दै सोध्दै थिए । कोही चाहिँ अमूक पार्टीको कार्यकर्ता हो, अब तलाई बाँकी राख्दैनौं भन्दै थिए ।
यो सिलसिला झन्डै एक डेढ घन्टा चल्यो । यसबीचमा कमसेकम ९० देखि १०० वटा जति फोन आए । जसमध्ये समाचारको सत्यता बुझ्ने ५–७ जना मात्र थिए ।
पत्रकारितामा लागेको करिब एक दशकको अवधिमा न्युज रुममा यति धेरै तनाव पहिलोपटक बेहोरें । मिडिया एनपीले समाचार ब्रेक गरेर ठूलो अपराध नै गरेझैं गरी फोनमा गालीगलौज गर्न थालियो ।
त्यतिबेलासम्म अन्य मिडियाले भने ‘प्रकाशलाई हर्ट अट्याक भएको’, ‘नर्भिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको’ र ‘प्रकाशको उपचार भइरहेको’ भन्ने बेहोराको खबर प्रकाशित गर्दै थिए । सबैले समाचारको पुष्टि गर्न सकेकै थिएनन् । तर, मिडिया एनपीले भने समाचारको आधिकारिता पुष्टि गरेर प्रकाशित गरेकाले सोच्दै नसोचेको घटना भयो भनेर म भनें स्तब्ध थिएँ ।
त्यसबेलासम्म फोनको घन्टी बज्न छाडेन । धेरै भएपछि फोन रिसिभ गर्नै छाडिदिएँ ।
हुन त समाचार लेखेकै कारण सामान्य धम्की यसअघि पनि नआएका होइनन्, तर विगतका भन्दा आइतबार बिहानको धम्की भने निकै फरक थियो । समाचारको प्रभाव र असरबारे मलाई थाहा नभएको होइन । तैपनि पत्रकारका नाताले ‘नयाँ’ नै ‘न्युज’ भएकाले लेख्नै पर्ने हुन्छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस्– रहेनन् प्रचण्ड पुत्र प्रकाश दाहाल
‘स्टुडेन्ट अफ द ईयर-२’ फस्ट लुक सार्वजनिक